2 Enti nea edi kan koraa no, mehyɛ wo nkuran sɛ momfa nkotɔsrɛ, mpaebɔ,+ srɛ a wɔsrɛ ma afoforo ne aseda nni mma nnipa ahorow nyinaa,+ 2 ahene+ ne wɔn a wɔwɔ dibea a ɛkorɔn nyinaa;+ ɛno bɛma yɛde asomdwoe ne kommyɛ abɔ yɛn bra wɔ onyamesom pa ne anidahɔ a edi mũ mu.+ 3 Eyi na eye na ɛfata+ wɔ yɛn Agyenkwa Nyankopɔn+ anim; 4 ɔno na ɔpɛ sɛ ogye+ nnipa ahorow nyinaa+ ma wobenya nokware+ no ho nimdeɛ+ a edi mũ. 5 Na Onyankopɔn koro+ na ɔwɔ hɔ, ne Onyankopɔn+ ne nnipa+ ntamgyinafo+ koro, onipa Kristo Yesu+ 6 a ɔde ne ho mae sɛ agyede a ɛfata maa nnipa nyinaa+​—eyi na wobedi ho adanse wɔ ne bere mu. 7 Adanse+ yi nti na wɔpaw me sɛ ɔsɛnkafo ne ɔsomafo+​—nokware na mereka,+ ɛnyɛ atoro​—amanaman+ kyerɛkyerɛfo wɔ gyidi+ ne nokware ho. 8 Enti mepɛ sɛ mmarima kura mpaebɔ mu baabiara, na wɔma nsa+ a ɛho tew so a abufuw+ ne akyinnyegye+ mma mu. 9 Saa ara nso na mepɛ sɛ mmea de fɛre+ ne adwenemtew hyɛ ntade a ɛfata, ɛnyɛ mmɛsawɔw soronko ne sika anaa nhene anaa ntade a ne bo yɛ den kɛse+ mu, 10 na mmom nea ɛfata mmea a wɔkyerɛ sɛ wɔsom Onyankopɔn,+ denam nnwuma pa+ so. 11 Ɔbea nyɛ komm mfi ahobrɛase nyinaa mu nsua ade.+ 12 Memma ɔbea kwan sɛ ɔnkyerɛkyerɛ+ anaasɛ onni ɔbarima so tumi,+ na mmom sɛ ɔnyɛ komm. 13 Efisɛ Adam na wodii kan bɔɔ no ansa na wɔrebɔ Hawa.+ 14 Afei nso ɛnyɛ Adam na wɔdaadaa+ no, na mmom ɔbea no na wɔdaadaa+ no ma ɔtoo mmara.+ 15 Nanso sɛ ɔkɔ so tena gyidi ne ɔdɔ ne ahotew ne adwenemtew+ mu a, ɔnam abawo+ so benya ahobammɔ.